Uwe ejiji nke Veracruz, njikọ n'etiti omenala Mexico na Spanish | Akụkọ Njem
Luis Martinez | 13/04/2021 09:54 | omenala, Mexico
Uwe ejiji nke Veracruz na-aza, n'otu aka, na mkpụrụedemede autochthonous nke steeti Mexico a, na nke ọzọ, na mmetụta nke ndị na-achị Spanish. Ọ bụ eziokwu na obodo ọ bụla dị na mpaghara Veracruz na mba niile nwere nke ha ahụkarị uwe, ma enwere uwe na-akọwa ma steeti ma isi obodo ya.
Ebe ọ bụ na Veracruz dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri Mexico ọ nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ nke okpomọkụ, ụdị uwe ya kwesịrị ịbụ, n'ike, ọkụ ma ọ gaghị ekpo ọkụ. Onu ogugu nke kariri ogo iri abuo enweghi ike anabataghi ya na aho. Mana enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ kpebiri ụdị ejiji nke Veracruz. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ha, anyị na-akpọ gị oku ịga n’ihu n’ịgụ ihe.
1 Akụkọ banyere ụdị ejiji nke Veracruz
2 Kedu ka uwe jarocho si dị
2.1 Dị ejiji Veracruz maka ụmụ nwanyị
2.2 Typicaldị ejiji nke Veracruz maka ụmụ nwoke
3 Kedu mgbe eji eji ejiji jarocho eme ihe
Akụkọ banyere ụdị ejiji nke Veracruz
Ihe mbụ anyị kwesịrị igosi gị bụ na steeti Veracruz na-ejikwa ya uwe charro na Tehuano wodrobu. Nke a jiri ụmụ nwanyị Zapotec nke steeti nke Oaxaca ma onye na-ese ihe wee mee ka ọ ghara ịnwụ anwụ Frida khalo n'ọtụtụ ihe osise ya. Ma nke a na nke mbụ abụrụla akara ụwa nke Mexico. Ya mere, ọ gaghị eju gị anya na ha bụkwa ụdị Veracruz.
N'agbanyeghị ihe niile anyị kọwaara gị, a na-akpọ ụdị ejiji Veracruz par nke kacha mma jarocho uwe, nke sitere na ihe a na-akpọ Sotavento Veracruzano, nke ahụ bụ ịsị, nke mpaghara steeti si otu a na-agbatị site na ndịda nke otu. Ọzọkwa, uwe a nwere akụkọ ihe na-atọ ụtọ.
Ọ bụ kwuru na ndị inyom mbụ rutere na Spain ka Papaloapan bezin ha na-eyi uwe ndị e si na Iberian Peninsula. Ha na Ejiji ndị Andalusia ma ọ bụ Levantine eji akwa oji na ichie eji eme ya. Ma na mpaghara a nke Veracruz, dị ka anyị gwara gị, ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu, na mgbakwunye, iru mmiri na-ebute. Ya mere, uwe ndị e si Spain weta ekwesịghị ekwesị, ebe ọ bụ na e mewo ya maka ihu igwe jụrụ oyi.
Uwe ndị inyom a nwere uwe mwụda mara mma, akwa mkpuchi, akwa mkpuchi, akwa sọks, na akpụkpọ ụkwụ velvet. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji ọla nchara silk ma ọ bụ velvet chọọ ya mma site na ọla ntị ndị a rapara n’olu.
Veracruz ejiji ejiji maka ụmụ nwanyị
Agbanyeghị, ụmụ nwanyị ala ama ama yi uwe mwụda na uwe elu nwanyị nwere labụ bobbin wee daa ubu, yana akpụkpọ ụkwụ n'ụdị mkpuchi. Ndị Spen ghọtara uwe kwesịrị ekwesị karị maka ihu igwe Veracruz ma ha malitere ịhapụ uwe ha butere na Spain.
Dịka ngwakọta nke ejiji obodo na ụfọdụ mmetụta ndị Hispanic, ndị jarocho uwe, nke nakwekwara ụdị ndị ahụ maka ụmụ nwoke. Ọ bụ, ya mere, usoro njikọ n'etiti ụdị peninsular na nke Sotavento Veracruzano. Na mgbakwunye, agbakwunye na ngwa na ihe ịchọ mma.
Ozugbo anyị mere ntakịrị akụkọ ihe mere eme, oge eruola ka anyị kọwaa n'ụzọ doro anya na n'ụzọ zuru ezu ụdị ejiji ejiji nke Veracruz dị.
Kedu ka uwe jarocho si dị
N’ụzọ ezi uche dị na ya, iji kọwaa ụdị ejiji ejiji nke Veracruz, anyị ga-amata ọdịiche dị n’etiti uwe ụmụ nwanyị na nke ụmụ nwoke. Agbanyeghị, ha abụọ nwere aha abụọ: acha ọcha na akwa akwa kwesịrị ekwesị maka okpomọkụ.
Dị ejiji Veracruz maka ụmụ nwanyị
Uwe Jarocha maka ụmụ nwanyị bụ ọbụna mara mma karịa nke ahụ maka ụmụ mmadụ, ebe ọ bụ na o nweela ihe mkpuchi, ihe ịchọ mma na ihe ịchọ mma. Uwe ejiji nke uwe a bu ihe ndia:
Uwe elu nwanyị uwe abalị acha ọcha nke ejiri owu na "ntupu" n'ubu na obi. Nke a pụtara na, n'akụkụ ndị ahụ, ha nwere ihe mkpuchi n'ụdị okporo. Ọzọkwa, ejiri barrette ejiri silk ribọn mechie ya n'olu.
Petticoat dịkwa ọcha ma gridded na ala nke ejiri dị ka ndabere.
una sket ogologo ogologo na mbara efe efe n'elu peti nke na-ekpuchi nkwonkwo ụkwụ na nke na-adịkarị ọcha. N'otu aka ahụ, a na-achọ ya mma Ihe mkpuchi ma na-enwekarị ntakịrị nke mama.
Uwe ojii ọ dị mkpụmkpụ na velvet ojii ma jiri okooko osisi na-acha ọbara ọbara yana akwa lace. A na-eke ya n'úkwù site na a eriri silk na n'úkwù-ya e nwere bandana ejiri owu mee ya, ya bu, akwa akaji nke ejiri agba agba agba agba abuo.
una mantilla ma ọ bụ shawl nke nwere ike iji lace ma ọ bụ nke ejiri tulle. A na-etinye ya n'ubu ndị e kedoro ya na obi site na a loket ma obu cameo iji gosipụta ntupu nke uwe abalị n'okpuru.
Un shawl ma ọ bụ shawl nke abụọ ejiri eriri silk mee nke ọma na nke ahụ na eriri na-achọ ntutu isi mma.
Nwanyị na-eji ejiji jarocho
Tinyere ihe niile dị n'elu, ụdị ejiji nke Veracruz maka ụmụ nwanyị gụnyere dị iche iche ngwa y otu ntutu isi. Banyere nke ikpeazụ, ọ nwere bun na braids abụọ a na-eji akwa isi chọọ mma, nke a na-akpọkwa cachirulo. N'ikpeazụ, a na-eji ntutu isi edozi ma ọ bụ Roses nke a na-etinye n'otu akụkụ ma ọ bụ isi nke ọzọ dabere na ọnọdụ alụmdi na nwunye nke onye ahụ. Ọ bụrụ na ọ lụbeghị di, ha na-aga n’aka ekpe, ebe ọ lụrụ di, ha na-aga n’aka nri.
Banyere ngwa nke ụdị ejiji Veracruz maka ụmụ nwanyị, a onye ofufe nghọta site n'olu site a olu akwa. Nke a na-abụkarị ọla ezinụlọ. Enwere ike iji ọla edo ma ọ bụ pearl mee ya, kamakwa coral ma ọ bụ filigree. N’ikpeazu, na ufodu, ana-eyi obe obe n’elu olu ya site na eriri velvet.
Typicaldị ejiji nke Veracruz maka ụmụ nwoke
A otutu dị mfe karị na nke dị n'elu bụ ụdị uwe Veracruz maka ụmụ nwoke. Agbanyeghị, ọ dịkwa mma nke ukwuu, dịka anyị gwara gị, kwụpụtara maka agba ọcha nke uwe niile. Na nke a, ihe kachasị mkpa bụ ihe ndị a:
Un ogologo ọkpa nke e ji akwa ọhụrụ rute na ụkwụ, nke ahụ bụ, n’adịghị ka uwe ndị ọzọ na-ahụkarị, ọ bụghị akpa ma ọ bụ ikpere.
una guayabera ma ọ bụ uwe elu nwere ogologo aka na-enweghị aka ma mekwaa ya bụ akwa na-enweghị ọkụ na akpa ihu. Ọ na-enwekarị ọatsụ iji nye ya mmetụ nke ịdị mma.
Pịnye akpụkpọ ụkwụ loot na agba ojii ma ọ bụ ọcha.
Nkwụ okpu nwere slits anọ na mpaghara elu ya (nke a na-akpọ "nkume").
Kpoo ma ọ bụ nnukwu handikachif na-enwu gbaa na agba, ọkacha mma-acha ọbara ọbara na nwa, gburugburu n'olu.
Dịka anyị kọwaara gị na ị nwere ike ịkọwapụta na nkọwa anyị, ụdị ejiji Veracruz maka ụmụ nwoke dị obere karịa nke ụmụ nwanyị. Otú ọ dị, agwakọta nke ọma na nke a.
Otu ìgwè nke ụmụ amaala Veracruz nwere ejiji
Kedu mgbe eji eji ejiji jarocho eme ihe
N'izugbe, a na-eji ejiji jarocho eme ihe ihe omume obula ma ọ bụ ezumike nke a na-eme na steeti Veracruz. Ọtụtụ omenala agba egwu otu na-eji ya, kpomkwem, ịkọwa ihe Ha bụ jarocho ma ọ bụ zapateado. E nwere ụdị egwu abụọ: di na nwunye na-ada na ihe a na-akpọ "Site na kpokọtara" maka ịgba egwu na otu.
A na-eji egwu a so ya okike dika ngwa ọdịnala dị ka jarana, obere obere guitar; requinto, sitere n'otu ezinụlọ dị ka nke gara aga; ụbọ akwara, obere ịgbà na ọkpụkpụ agba oké ịnyịnya ibu, nke na-aga ịkụ ụjà. A na-asụgharị ha niile abụ olu ụtọ nke ndị obodo, ụfọdụ n’ime ha bụ ndị a ma ama n’ụwa nile. Ọmụmaatụ, La Bamba, Gbọ mmiri o Mmiri sirop.
A na-atụgharịkwa ha huapangos, abụ olu ụtọ na mbinye aka oge nke oge na-esite na mpaghara ahụ, ọbụnakwa ụda nke Afro-Caribbean sitere na ama Cuban danzón.
N’aka nke ọzọ, ị ga - enwekwa mmasi ịmara mgbe emume ndị a na - eme. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Veracruz, ị nwere ike ịme njem gị dabara na ha. Otu n'ime ụbọchị egosipụtara bụ na ngagharingosi si n'obodo Veracruz n'onwe ya, nke a kọwara dịka "onye kacha nwee obi ụtọ n'ụwa."
Ma Jarocho ụwa hụrụ ulo ke obio Jaltipan, site na steeti Veracruz n'onwe ya. Ná ngwụsị nke afọ a obodo na-ahazi ihe Ememme Fandango, nke na-eme ka ndị na-ese egwu na-ewu ewu si mba niile na mba ofesi. Ya mere, ụda jarocho na ịgba egwu enweghị ike ịnọ na ihe omume a.
N'otu aka ahụ, ọdịnala Jarocha nwere mkpọrọgwụ miri emi n'obodo Córdoba, nke a na-akpọkwa Lomas de Huilango, ruo n'ókè na ọ na-ahazi a Nwa Jarocho zutere nke gunyere ihe ngosi ya na ejiji nke Veracruz. Ma ihe omume ndị ọzọ dịka ogbako, nzukọ, nzukọ na ọbụna ọrụ gala iji chebe ọdịnala ọdịnala a nke steeti Veracruz.
Jarocho agba egwu
N'ikpeazụ, anyị ga-agwa gị banyere obodo nke Tlacotalpan, nke dị kpọmkwem na oke basin Papaloapan, ebe, dịka anyị gwara gị, ekike akwa jarocho mụrụ. N’obodo a mara nma, nke ekwuputala ebe etiti ya Ihe nketa nke mmadu, na-eme ememe na Nzukọ nke Jaraneros na Decimistas. Ọ bụ ememme a raara nye ichekwa egwu egwu niile na-agbakọ na nwa jarocho na ọ bụ otu n'ime akụkọ akụkọ akụkọ kachasị mkpa na Mexico niile.
Na mmechi, anyi kowara gi ihe bu mbido ahụkarị ekike nke Veracruz, tinyekwara uwe ndị mere ụmụ nwoke na ụmụ nwoke. Na, otu aka ahụ, olee ememme ndị kachasị ewu ewu iji yikwasị ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ otu n'ime uwe ọdịnala na gbanyekwuo mkpọrọgwụ ma nwekwuo ekele na mba Mexico dum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Mexico » Typicaldị ejiji nke Veracruz